Ngaba indawo ekuKhangelwa kuyo ekuPhembeleleni intlalontle? | Martech Zone
Ngaba indawo ekuKhangelwa kuyo ekuPhembeleleni intlalontle?
NgoMvulo, Juni 18, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Le yenye yezo ngxoxo zibalulekileyo zokuchasana nokulungelelaniswa. Ngaba ukukhankanywa kwezentlalo kuchaphazela ngokuthe ngqo isikhundla sakho seinjini yokukhangela? Okanye intlalontle ibarometer enkulu yomsebenzi kwiwebhu evelisa ezinye izinto ezichaphazela isikhundla. UGoogle noFacebook abahlobo nyani ngeli xesha- ngeMicrosoft enofikelelo kwimisebenzi kaFacebook, akuthandabuzeki ukuba uGoogle unayo nayiphi na ingqiqo (nangona inokubakho kubantu besithathu).
Andiyithandabuzi into yokuba uGoogle uqalile ukubeka iliso kwimigca yoluntu ukunceda ukwandisa ukubaluleka kokuma kwe-algorithms. Ixesha elide kakhulu, yonke into ibimalunga ne-backlinks. Ngenxa yoko, imboni ye-SEO yahamba ngamantongomane ivelisa iitoni zemali kunye neetoni ze-backlinks. Utshintsho lwamva nje lwealgorithm luye lwayiqhuba ngenene impembelelo ye-crappy backlinks ezantsi, kwaye ndiyakholelwa ukuba kukho ugxininiso olukhulu kwintetho zentlalo. Ayindim ndedwa ocinga njalo, nangona kunjalo.
UkuBekwa kweTasty yenze uvavanyo lwayo kwaye yeza nezinto ezibalulekileyo ezithathiweyo… eyona inkulu kuzo zonke kukuyeka ukurhuqa iinyawo zakho kwaye uqale ukusebenzisa iGoogle + ngakumbi!
tags: facebook uyayithandagoogle kunyeukuthandwadibanisa 1sdibanisa enyeisikhundlaPhinda impenduloSEOIsicwangciso seoTweets
Kutheni abantu bebhala uphononongo lwe-Intanethi?
Izitshixo ezi-4 zePhulo eliSebenzayo leSelfowuni
Juni 19, 2012 ngo-3: 26 AM
I-infographic entle enceda abasebenzisi bokuthengisa kwi-Intanethi ukukhuthaza indawo yabo ngala maqhinga…
Jul 4, 2012 ngo-6: 56 PM
Ngaba ukwazile ukwenza iikopi zolu vavanyo lwesinye?